အစားအစာအတွက်အကောင်းဆုံးအလေးချိန်စက်ကဘာလဲ။ - အဆင့်မြင့်နည်းပညာစက်ယန္တရား
10 ဦးခေါင်း Multihead Weigher
14 Mulithead Weigher ခေါင်းများ
နေအိမ် / သတင်းနှင့်အဖြစ်အပျက် / အစားအစာအတွက်အကောင်းဆုံးအလေးချိန်စက်ကဘာလဲ။
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-07-21 မူလ:ဆိုက်ကို
သင်အကောင်းဆုံးသောအစာအတွက်အကောင်းဆုံးအလေးချိန်စက်ကိုစဉ်းစားရန်စီစဉ်ထားသည့်အခါတိုင်းအလေးချိန်စက်သည်မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်ကိုသင်သိရမည်။ အစားအစာစနစ်များနှင့်ထုပ်ပိုးသည့်အထုပ်များအတွက်အလိုအလျောက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်အလိုအလျှောက်အော်တိုအလေးချိန်စက်ထုတ်လုပ်သူအချို့ရှိသည်။
အစားအစာအလေးချိန်နှင့်ထုပ်ပိုးစနစ် HT FP FP
သငျသညျအစာထုပ်ပိုးအတွက်ပိုကြီးတဲ့ setup ကိုရှိပါက, ထို့နောက်သင်အလိုအလျောက်နှင့်မြင့်မားသောနည်းပညာဖြစ်သောကြံ့ခိုင်သောအလေးချိန်စက်လိုအပ်ပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်နည်းပညာများသည်အရေးပါသည်။ ထို့အပြင်သင်အလေးချိန်စက်ကိုအစားအစာအတွက်အထူးပြုလုပ်မရစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
မည်သည့်အလိုအလျောက်စက်သည်အစားအစာအတွက်အကောင်းဆုံးအလေးချိန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အထက်ဖော်ပြပါအလားအလာများအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီသည်ကိုရှာဖွေရန်သင်သုတေသနအနည်းငယ်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ အစားအစာအလေးချိန်နှင့်ထုပ်ပိုးစနစ် HT FP သည်အစားအစာ၏တောင်ပံများနှင့်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးအလိုအလျောက်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်မြင့်စနစ်စနစ်ကိုအကောင်းဆုံးပစ္စည်းဖြင့်တည်ဆောက်သည်။ ၎င်းသည်ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု. အစားအစာထုပ်ပိုးမှုနှင့်လည်းသင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
အစားအစာ၏အလိုအလျောက်ထုပ်ပိုးခြင်းသည်ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူစေသည်။ အစားအစာထုပ်ပိုးရန်အတွက်သင်အချိန်များစွာမစားသည့်အခါအခြားထုတ်လုပ်မှုများတွင်အလုပ်လုပ်ရန်အချိန်ယူရမည်။ အလိုအလျောက်စနစ်ပေါ် မူတည်. အစားအစာကိုချိန်သည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင့်အားရေရှည်တွင်ငွေများသိမ်းဆည်းမည့်လူအင်အားကိုမလိုအပ်ပါ။ ဤစနစ်သည်နှစ်ရှည်လများတည်ရှိပြီးပိုမိုကြီးမားသောကုမ္ပဏီများအတွက်လုံးဝပြီးပြည့်စုံသောမယုံနိုင်လောက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ အစားအစာကိုချိန်ညှိရန်ပလက်ဖောင်းနှင့် multi-hem သောချိန်ရှိသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်တွင်အစားအစာလွှဲပြောင်းရန်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာသောပါးလွှာသောခါးပတ်ရှိပါတယ်။
ဤသည်သည်ယန္တရားကိုနားလည်ရန်သင့်အတွက်အချိန်များစွာမယူပါ။ ဘီးများရရှိနိုင်သည့်ဘီးများရှိသည်။ ၎င်းသည်ပလက်ဖောင်းကိုရွေ့လျားရန်အတွက်လုံးဝပြီးပြည့်စုံစေသည်။ ဤမယုံနိုင်လောက်အောင်အရည်အသွေးရှိသောအလေးချိန်ရှိသောစက်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်များအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးလေးသောစက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
ဤအကောင်းဆုံးလေးသောအလေးချိန်စက်သည် 400 ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိပြီး၎င်းသည်အစားအစာထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ပို့ခြင်းအတွက်ကြီးမားသောစက်ရုံတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ သင်အစားအစာများကိုစနစ်တကျလည်ပတ်နိုင်သည့်ဂိုဒေါင်ကြီးတစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်တစ်မိနစ်လျှင်အိတ် 60 အထိထုပ်ပိုးမြန်နှုန်းရှိသည်။ အနည်းဆုံးအကွာအဝေးကိုတစ်မိနစ်လျှင် V15 အိတ်များဖြစ်နိုင်သည်။ အခြားအင်္ဂါရပ်များတွင် 1400 x 970 x 1600 မီလီမီတာရှိသောရှုထောင့်များပါ0င်သည်။
မယုံနိုင်လောက်အောင်အင်္ဂါရပ်များအားလုံးအပေါ် အခြေခံ. ဤထုပ်ပိုးစက်ကိုသင်ရနိုင်သည်။ ဤအလေးချိန်စက်သည်သင်သိထားရမည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရန်ထိပ်တန်းထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤမယုံနိုင်စရာတရုတ်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတွင်အရည်အသွေးရှိသောစက်ကိရိယာများနှင့်ကိရိယာများရှိသည်။ ဒါ့အပြင်သင်ရှာဖွေနေတဲ့အကောင်းဆုံးလေးသောစက်ကိုပေးနိုင်သည်။
10 အကြီးအကဲ Multiaving အလေးချိန်
14 ဦး Muldhead အလေးချိန် 14 ဦး
2အရှေ့ keji လမ်း Xichong, Lunjiao မြို့, ရှံခရိုင်, Shunde ခရိုင်, Foshan, Foshan, Boshan,
 + 86-757-2733323323
 + 86-757-2281736